Hetezo ary apetaho amin'ny teknolojia Augmented Reality ao amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Ny fanapahana sy ny fametahana dia ao anatin'ny tontolon'ny rindrambaiko ary ankehitriny dia ampahany amin'ilay foto-kevitra momba ny haitao AR izay hanapoaka ny lohanao rehefa mijery ilay horonan-tsary ianao.
Miresaka izahay fa ity hevitra ity dia ahafahanao maka ny findainao haka sary ary ento mivantana amin'ny efijery Adobe Photoshop io zavatra io. Amin'izao fotoana izao ity programa Adobe ity dia notsapaina hamela antsika ho variana amin'ny haitao afaka manova ny fomba ampidirantsika singa amin'ireo fanontana amin'ity programa ity. Fifantohana amin'ilay horonantsary.
Tamin'ny horonantsary nozaraina tao amin'ny Twitter, ny programmer Cyril Diagne mampiseho ny fomba AR afaka mamela ny mpampiasa haka sary eran-tany amin'ny alàlan'ny findainy izy ireo ary hitondra izany mivantana amin'ny Photoshop eo amin'ny birao.
Tapaho. Tsy misy matotra. https://t.co/Lulnwo9G6e
- Adobe Photoshop (@Photoshop) Enga anie 6, 2020
Raha amin'ny farany dia lasa raha ny tena izy ny kaody noforonin'i Diagne, dia afaka manova tanteraka ny fizotran'ny asa. Raha ny marina, ilay programmer iray ihany dia nilaza fa misy "majia" kely eo am-panaovana izany. Ny rindrambaiko dia mampiasa ny fianarana milina mba hampisarahana ilay zavatra amin'ny tontolo manodidina azy, raha misy dingana hafa kosa afaka mamantatra ny toerana itarihan'ny telefaona ny fakantsary amin'ny solosaina findainy.
Ary raha ny prototype ny rindrambaiko amin'izao fotoana izao, Diagne dia nizara ny kaody amin'ny Github, mba hahafahan'ny tsirairay manandrana ilay fampiasa ho an'ny tenany. Amin'izao fotoana izao dia misy amin'ny Photoshop, saingy azo ampiasaina amin'ny programa hafa atsy ho atsy.
Raha izany no izy teknolojia AR mahavariana izay na ny ekipa ao ambadiky ny Adobe Photoshop Nozarainy tamin'ny kaontiny ilay horonantsary mampiseho ny fandidiana. Mazava fa tsy ho hajanona izy ireo ary efa mieritreritra ny hanao zavatra mitovy na hampiditra an'i Diagne ao anaty ekipa mba hananantsika io haitao manaitaitra io tsy ho ela. Mazava fa ho feno tsy ampoizina amin'ny ho avy ny ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Mahagaga Photoshop Cut & Paste AR Technology Izay Hahatonga ny lohanao hipoaka